अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनको भाषण (सारसंक्षेप) - Nepal Readers
Home » अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनको भाषण (सारसंक्षेप)
अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनको भाषण (सारसंक्षेप)
WASHINGTON, DC - JANUARY 20: U.S. President-elect Joe Biden takes the oath of office at the West Front of the U.S. Capitol during the inauguration of Biden on the West Front of the U.S. Capitol on January 20, 2021 in Washington, DC. During today's inauguration ceremony Joe Biden becomes the 46th president of the United States. (Photo by Erin Schaff-Pool/Getty Images)
जो बाइडेन (Joe Biden) अमेरिकाका ४६ औं राष्ट्रपति बनेका छन्। यही बुधवारका दिन शपथ लिएपछि बाइडेनले राष्ट्रपतिका रूपमा आफ्नो पहिलो भाषण दिएका छन्। सो भाषणमा बाइडेनले लोकतन्लाई सुदृढ गर्ने देखि नस्लभेदबारे आफ्ना कुरा राखेका छन्।
अमेरिका कुनै एक्लो व्यक्तिबाट होइन, केही व्यक्तिबाट होइन, सबैबाट बनेको हो।
सो भाषणमा बाइडेनले भने– यो लोकतन्त्रको विजय हो। अमेरिका आफ्नो परीक्षामा पास भएको छ। उन्ले शपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थितहरुलाई धन्यवाद दिदैं भने यो अमेरिकाको दिन हो, यो लोकतन्त्रको दिन हो। यो इतिहास बनाउने र अठोट गर्ने दिन हो।
यो इतिहास रचना गर्ने हो, अठोट बाध्नु पर्ने दिन हो। जहिले जहिले अमेरिकाले परीक्षामा उत्रनु पर्‍यो भयो, त्यसबेला यो पास भएको छ। आज एक उम्मेद्वार होइन, एक प्रतिज्ञाको जीत भएको छ। लोकतन्त्रको जीत भएको छ। हामीले पुन सिक्यौं कि लोकतन्त्र अनमोल चीज हो, तर नाजुक पनि रहेछ। यहाँको भूमिमा केही दिन अघि हाम्रो लोकतन्त्रको जगलाई हल्लाउने प्रयत्न भएको थियो। तर आज हामी शान्तिपूर्वक सत्ता परिवर्तनका लागि यहाँ उपस्थित भएका छौं। यस्तो २०० वर्षदेखि अमेरिकामा हुँदै आएको हो। अमेरिका कुनै एक्लो व्यक्तिबाट होइन, केही व्यक्तिबाट होइन, सबैबाट बनेको हो। हामीले धेरै कुरालाई ठीक गर्नु छ, धेरै कुरालाई पुनः स्थापित गर्नु छ। अमेरिकाले यस्तो चुनौतीलाई यस अघि कहिले सामना गर्नु परेको थिएन होला। कोरोनाले एक वर्षमा लिएको ज्यान जति त अमेरिकाले दोस्रो विश्व युद्धमा गुमाउन परेको थिएन, लाखौं बेरोजगार भएका छन्, हजारौं व्यवशायहरु बन्द भएका छन्।
आजकल एकताको कुरा गर्नु मूर्खको स्वप्न मानिइन्छ, मलाई थाहा छ कि हामीलाई फुटाउनेवाला ताकत ठूलो छ तर मलाई यो पनि थाहा छ कि यो नयाँ उव्जेको होइन ऐतिहासिक हो।
बाइडेनले आफ्नो पहिलो भाषणमा अमेरिकी नस्लभेदमा खुलेर बोलेका छन्। उनले भने,
“ ४०० वर्षदेखि नस्लीय न्यायसम्बन्धी मागहरुले हामीलाई झकझकाइरहेको छ। सबैका लागि न्याय प्राप्त गर्न प्रतिक्षा गरिरहने अवस्था हुनुहुँदैन। स्वयं हाम्रो ग्रहले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न गुहार गरिरहेको छ। राजनीतिमा कट्टरवाद बढेको छ, गोरा श्रेष्ठता, घरेलू आतङ्कवाद बढेको छ। हामीले यिनीहरुको सामना गर्नु पर्ने छ र हामी यिनीहरुलाई परास्त गर्नेछौं तर जीत्नका लागि हामीमा एकता हुनु जरूरी छ। आज म हृदयदेखि नै यही मात्र चाहन्छु अमेरिकी सबै एक होऔं, एकजुट होऊँ। एकताको कैयन शत्रु छन् – क्रोध, विरोध, घृणा, उग्रवाद, अपराध, हिंसा, बीमारी, निरासा, बेरोजगारी। तर एकता भएमा हामी हामी महान उपलव्धी हासिल गर्नेछौं।
हामी गल्ति भएका कुरालाई सच्याउन सक्छौं। बच्चाहरुलाई स्कूल पठाउन सक्छौं, रोजगारी उपलव्ध गराउने क्षेत्र विकास गर्न सक्छौं। भाइरसलाई हराउन सक्छौं। हामी मध्यम वर्गलाई पुन खड़ा गर्न सक्छौं। हामी सबै नस्ललाई न्याय दिन सक्छौं, हामी अमेरिकालाई पुनः विश्वको नेता बनाउन सक्छौं।
मलाई थाहा छ, आजकल एकताको कुरा गर्नु मूर्खको स्वप्न मानिइन्छ, मलाई थाहा छ कि हामीलाई फुटाउनेवाला ताकत ठूलो छ तर मलाई यो पनि थाहा छ कि यो नयाँ उव्जेको होइन ऐतिहासिक हो। हाम्रो इतिहास समानताको अमेरिकी आदर्श र नस्लभेद, घृणाको बीचको संघर्षले भरपुर छ तर विश्वयुद्ध, मन्दी र ९/११ जस्ता हरेक मामलामा आखिर जीत सच्चाइको नै भएको छ। यस्ता हरेक मामलामा हामी एकजुट भयौं भने अब पनि यसरी नै एकजुट हुनु पर्छ। इतिहास, आस्था र तथ्यले हामीलाई एकताको बाटो देखाउँछ। हामी एकअर्काका बाधक नठानौं, छिमेकी मानौं, एक अर्कालाई सम्मान गरौं, एकजुट होऊँ, गालीगलौंज बन्द गरौं, माहौललाई अलिक हलुका गरौं, एकता बिना शान्ति सम्भव छैन। क्रोध र तिक्ता छ, कुनै प्रगति छैन, सिर्फ क्रोध छ थकावट छ, राष्ट्र छैन सिर्फ हङ्गामा मात्र छ। यो चुनौतीको समय हो, यसकारण एकताको बाटो नै सही हो र यो समय हामी वास्तवमा नै युनाटेड स्टेट्स अफ अमेरिका बन्नु हो यदि हामीले यो काम गर्‍यौं भने म गारेन् दिन्छु हामी अनुतिर्ण हुँदैनौ। अघि बढौं नयाँ शुरुआत गर्न, अघि बढौं पुनः एकअर्काको कुरा सुन्न, बुझ्न, सम्मान गर्न। राजनीति बाटोमा सबैकुरालाई खाग बनाउने कुरा होइन। कुनै पनि असहमति युद्धको कारण हुने कुरा सही होइन। हामीले तथ्यहरुलाई तोडमरोड गरिने, कैयनपटक उत्पन्न गरिने संस्कृतिलाई निषेष गर्नु पर्छ।”
मलाई थाहा छ– बहुसंख्यक अमेरिकीहरु भविष्यबारे चिन्तित छन्, उनीहरु रोजागारी चाहन्छन्। मलाई थाहा छ – उनीहरु मेरो बा जस्तै रातभर सोच्छन् के उनले हेल्थकेयर सुविधा पाइरहलान्, ऋण चुक्ता गर्न सकिएला, आफ्ना परिवारको हेरचाह गर्न सकिएला। तर यस पछि के ?
म प्रतिज्ञा गर्छु यी सबै सकिनेछ तर यसको जवाब स्वार्थमा छैन, विभाजित भएर होइन। हामीले रेड बनाम ब्लू, ग्रामीण बनाम शहरी, परम्परावादी बनाम उदारवादीको रेखा खिचेर हुने यस्तो असभ्य युद्धलाई समाप्त गर्नै पर्छ। यदि हृदयलाई पत्थर नबनाइ आत्मीय बनाइयो भने, यदि हामी अलिकतिमात्र सहिष्णु भयौं भने, अलिकति विनम्र भयौं भने हामी यस्तो गर्न सक्छौं । जस्तो कि मेरो आमा भन्ने गर्नु हुन्थ्यो, आफू स्वयंलाई अरुको स्थानमा राखेर सोच्ने गर्दा भाग्य कुनैपनि बेला चम्किन सक्छ। कहिले तपाईं अरुलाई सहयोग गर्नु हुन्छ त कहिले तपाईंलाई अरुको सहयोगको जरुरत पर्दछ। यो नै जिउने तरिका हो। यस्तै गरियो भने मुलुक सुदृढ र समृद्ध हुनेछ।
जो बाइडेनले भाषणको अन्तमा कोरोनाभाइरसको प्रकोपको सामना गर्नेबारे भने,
शायद हामी भाइरसको सबैभन्दा खतरनाक समयमा प्रवेश गर्दै हौंला। आउनुहोस्! राजनीतिलाई पर राखेर एक मुलुकको रुपमा यो महामारीको सामना गरौं। दुनियाँले हामीलाई हेरिरहेको छ, उसका लागि मेरो सन्देश छ- अमेरिका हरेक परीक्षाबाट सफल भएको छ। हामी आफ्नो गठबन्धनलाई यथास्थितिमा ल्याउनेछौं र बिगतका लागि होइन कि आज र भविष्यको चुनौतिहरुलाई सामना गर्नका लागि विश्वसँग तालमेल गर्नेछौं। हामी नेतृत्व आफ्नो शक्तिको भरमा होइन उदाहरण बनेर गर्नेछौं। हामी शान्ति, प्रगति र सुरक्षाका लागि मजबूत पार्टनर बन्नेछौं। सत्य र हमारे लोकतन्त्रमाथि हमला भइरहेको छ। भाइरसको प्रकोप छ, असमानता बढ्दैछ, नस्लभेद छ, जलवायु संकटमा छ, दुनियामा अमेरिकाको स्थिति… यी सबैले हामीलाई चुनौती दिन काफी छन्। त्यसमाथि यी सारा चुनौतिहरु एकै समय एकै साथ आएका छन्। अब हामीले यिनीहरुको सामना कसरी गर्ने हामीले मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ। मेरो विश्वास छ हामी यसबाट बाहिर निस्कन सक्नेछौं र हामीले यस्तो गर्नसकेमा हामी अमेरिकाको कहानीको नयाँ अध्याय लेख्नेछौं। यदि हामीले यो गर्न सक्यौं भने भावी पीढ़िहरुले भन्नेछन् हाम्रा पुर्खाहरुले असाध्यै राम्रो गरेछन्।
अन्तमा म फेरि प्रतिज्ञा गर्दछु म संविधान, लोकतन्त्र, अमेरिकाको रक्षा गर्नेछु, म जे गर्नेछु तपाईहरुको हितमा गर्नेछु। हामी सबै मिलेर अमेरिकाको यस्तो कहानी लेखौं जहाँ अपेक्षाहरु हुन्- त्रास होइन, एकता होस्- विभाजन होइन, ज्योति होस्-अन्धकार होइन, मर्यादा र शालीनता होस्, प्रेम होस्, महानता होस्, सच्चाइ होस्। आउनुहोस्! हामी हाम्रो स्वतन्त्रतालाई आफ्नै देशमा रक्षा गरौं र दुनियालाई बाटो देखाऊँ।
ए प्रभू अमेरिकालाई आशिर्वाद दिनुहोस् र हाम्रो सन्ततिको रक्षा गर्नुहोस्।